शुतुरमुर्ग फारम। चेल्याबिन्स्क र विदेशी चरा
रूसी जलवायु को मौसम र तापमान अवस्था कालो समायोजन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ अफ्रीकी ostriches। उनि एकदम उत्पादक हो र यस्तो अस्टीच खेत रूपमा अवस्थामा 70 वर्ष सम्म बाँचिरहेका छौं। चेल्याबिन्स्क, बर्नाउल, केमेरोभो, क्रास्नोडार, नोवोसिबिर्स्क र देश को धेरै अन्य क्षेत्रहरु आफ्नो बासिन्दा आहार अन्डा प्रयास गरेका छन्, र यी विदेशी चरा को मासु तथ्यलाई को घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यो उत्पादन अस्टीच खेत?
यी विशाल नस्ल जो पहिलो खेत, flightless चरा दक्षिण अफ्रीका मा देखा - प्रारम्भिक 19 औं सताब्दी मा, अस्टीच पंख ठूलो माग थिए। हाम्रो समय मा, मांग र मासु र अन्डा र छाला र यी चरा को पंख मा। कारीगरों यो रंग र ठूलो इस्टर उपहार गरे: पनि खोल को प्रयोग हो। यो कुनै अस्टीच खेत छ जहाँ भूमि टुक्रा नाम गाह्रो छ। स्थानीय अर्थतन्त्रको ठेगाना सधैं सजिलै पहुँच छ र रूस उदाहरणका लागि, कुनै अपवाद छ:
गाउँ क्षेत्र Sosnowski चेल्याबिन्स्क क्षेत्रका;
को Leningrad क्षेत्र को Vsevolozhsk जिल्ला Beloostrov गाउँमा "शुतुरमुर्ग फारम";
बर्नाउल नजिकै गाउँमा Vlasikha मा "पाइन मा ostriches"।
एक omelette कसरी खाना पकाउनु अस्टीच अन्डा को?
शुतुरमुर्ग अन्डा - को खेत को व्यावसायिक मूल्य हो। तिनीहरूलाई लगभग सबै unfertilized को अपवाद संग कोरलिँदै लागि प्रयोग गरिन्छ। औसत अन्डा 1.5 किलो वजन र महिला को पुच्छर मा निर्भर गर्दछ र कालो गर्न गाढा हरियो बन्द गर्न एक yellowish-गुलाबी को हुन सक्छ रंग जो एक धेरै बलियो र हल्का खोल, छ। यस्तो अन्डा सामग्रीहरू दस मान्छे saturate गर्न सक्नुहुन्छ। को गर्मी मौसमको लागि एक चरा देखि, तिनीहरूले 80 भन्दा बढी टुक्रा प्राप्त गर्नुहोस्।
दुवै पक्ष बाट drilled एक विशाल omelette खोल तयार गर्न। त्यसपछि विशेष पिन छाडा आन्तरिक सामग्रीहरू हुन्छ र यो एउटा ठूलो कराइ हालिएको। तपाईं एक पकाउन गर्न चाहनुहुन्छ भने कडा उसिनेर अन्डा, दुई घण्टा यसलाई जोश हुनेछ।
शुतुरमुर्ग छाला, को गोही भन्दा बढी मूल्यवान छ जो, बैग र जूता, फर्नीचर र सामान को टुक्रा गरे। यो सामाग्री, पनरोक एक प्राकृतिक लोच र विशेष बनावट छ।
कसरी बाँच्न र तिनीहरूले यी विशाल चराहरू के खाने?
सादा अस्टीच खेत (चेल्याबिन्स्क) - यो एकदम विशाल क्षेत्र छ। प्रत्येक चरा परिवार त्यहाँ हिँड्न ठाउँ छ जहाँ एक अलग बाडे, मा जीवन को एक पुरुष र धेरै महिलाहरुको मिलेर। को खेत एक incubator छैन भने, strausiha नै जवान educates। तर महिला पुरुष बनाउँछ प्वाल गर्न अन्डा। त्यो खाना वा हिंड्न गएपछि उनको मित्र प्रतिस्थापन।
चरा गाजर, मकै र बन्दागोभी खान प्रेम। तपाईं पूरक रुचाउने बिना गर्न सक्छन् गर्मी मा, तिनीहरूले मात्र alfalfa खान्छन्। पानी संग रक्सी न पीने वाला कलम दिन आवश्यक छ।
त्यो गाउँमा Beloostrov के बनाउँछ छ। शुतुरमुर्ग फारम मासु र अन्डा उत्पादन मात्र होइन, तर पनि क्षेत्र को एक रोचक भ्रमण प्रदान गर्दछ छ। यहाँ गिनी fowl र चिनियाँ रेशम कुखुरा, खरायो, turkeys, भेडा र घोडा बाँचिरहेका छौं। तिमी, बाटोमा हिंड्न सक्छौं संग जनावर र चरा कुराकानी गर्न, गजेबो मा आराम, को ostriches खुवाउन, र पाठ्यक्रम, मासु र अस्टीच अन्डा को भाँडा स्वाद।
अफ्रिकी चरा को मासु के स्वाद छ?
अस्टीच मासु बाट व्यञ्जन, तिनीहरूले सक्षम छन् र राम्ररी तयार भने, एक विशेष, धेरै नाजुक स्वाद, जिगर को अलिकति reminiscent छ। प्रोटिन मा कोलेस्ट्रल मा scanty र उच्च संग बिल्कुल दुबला पट्टिका आदर्श अत्तरहरु को स्वाद अवशोषित गर्न सक्षम छ। शुतुरमुर्ग मासु nutritionists विश्वास र tastier टर्की। एशिया, युरोप र अमेरिका मा धेरै देशहरूको बजारमा बिस्तारै ousting हुन्छ बीफ र सुँगुर को मासु, जो अस्टीच खेत यस्ता सेवाहरू। भ्रमण, बढ्दै चरा र रूस को मानिसहरूलाई मदत गर्न नयाँ व्यञ्जन प्रक्रिया एउटा क्रमिक परिचय यो स्वादिष्ट र स्वास्थ्यकर खाना खान प्रयोग गर्न। अफ्रिकी दिग्गज एक सकारात्मक सुविधा के ostriches बिरामी कहिल्यै कल गर्न सक्नुहुन्छ। को चरा एक पटक सधैं स्वस्थ छ, र यसको मासु को उत्पादन धेरै उपयोगी छ।
शुतुरमुर्ग फारम (चेल्याबिन्स्क वा अन्य) उत्पादन को उच्च लागत बावजुद, एकदम लाभदायक व्यवसाय हुन मानिन्छ। रूस मा कुखुरा फारमहरु संख्या, तेजी बढ्दै छ मासु बनाउने र अन्डा बजार मा प्रतिस्पर्धी हुन्। विश्लेषकहरूले निकट भविष्यमा झन् मात्र पहिले नै अस्टीच खेत (बर्नाउल), तर पनि अन्य यस्तै सेवाहरू पठाएमा जो सामान्य र परम्परागत मासु उत्पादनहरु उत्पादन को प्रतिस्थापन हुनेछ, सुझाव।
हिउँ र अफ्रिकी चरा
को अस्टीच अफ्रिका घर हो भन्ने तथ्यलाई तापनि तिनीहरू सफलतापूर्वक चिसो रूसी जाडोयाम प्रयोग प्राप्त। खुशी साथ चरा हिउँ मा bathed र तापमान-शून्य हिंड्न। चल्छ लागि cages मा बरफ बालुवा छिडकना गर्न आवश्यक रूपमा तिनीहरूलाई लागि घरहरू पृथक हुनुपर्छ। Ostriches छिटो चलाउन र तपाईं छैन भने, पर्ची गर्न सक्छन् एक खुट्टा तोड्न।
शुतुरमुर्ग फारम - चेल्याबिन्स्क, गाउँ क्षेत्र - यसरी प्रबन्ध मिलाए। पनि हिउँदमा तपाईं को खेत भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ र मायालु हात संग चरा खुवाउन हास्यास्पद चित्र, पट्टिका टुक्रा संग उपचार गर्न बनाउन।
एक कुखुरा फार्ममा के रोचक कुरा हुन सक्छ?
निस्सन्देह, यो खेत भ्रमण को न्यानो अवधिमा धेरै रोचक ठाँउ लिन्छ। तिमी, खेत को अन्य बासिन्दाहरूलाई हेर्न सक्छन् ठूलो फोटो बनाउन कि चरा र जनावरहरू खुवाउन। बाँकी र खाजा लागि विशेष प्रबन्ध क्षेत्र तपाईं अस्टीच मेनुको तयार व्यञ्जन एक स्वाद गर्न सक्छन्। यी भ्रमणहरू को मूड तपाईं एक अस्टीच पंख वा अन्य स्मारिका किन्न, विशेष गरी यदि सारा वर्षको लागि एकदम र सम्झनाहरु पर्याप्त वृद्धि।
अजवाइन के हो? रोपण र हेरविचार
Polycarbonate Greenhouses संसाधन किरा र रोगहरु विरुद्ध वसन्त
को gosling जीवनको पहिलो महिना मा खुवाउने?
"Yenisei" फसल संयोजन। को संक्षिप्त विवरण
पुरानो periodontitis: लक्षण, प्रकार र उपचार
एडिडास sweatshirt - शीर्ष सडक शैली
Accommodation लातविया Accommodation (पर्वत) कहाँ छ? पवित्र पहाड: विवरण, उचाइ। कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न? माउन्ट Accommodation लातविया Accommodation को monasteries
फ्रिज एलजी GA E409SERA: वर्णन, सुविधा र समीक्षा
टमाटर "Mikado": विविधता को वर्णन, विशेष गरी खेती र हेरविचार समीक्षा
Immutable आध्यात्मिक मान हुनुहुन्छ?
कसरी हतार मा एक प्रकाश रातीको अन्तिम खाना पकाउन गर्न: व्यञ्जनहरु
Monotheism के हो र यो कसरी देखियो?
प्रिस्कूल र प्राथमिक विद्यालय बच्चाहरु को लागि Correctional र विकासात्मक गतिविधिहरु
स्याउ को एक ठूलो संख्या को लागि सबै भन्दा राम्रो Juicer: चयन सिफारिसहरू
खैरो आँखा। आँखाको रंग मूल्य